Usoro na Nzuzo - Kefalonia.mobi
Anyị website adreesị bụ: http://kefalonia.mobi
Comments, Kpọtụrụ forms na Chats
Mgbe ndị ọbịa ịhapụ ihe, jupụta a kọntaktị ụdị ma ọ bụ nkata na anyị na saịtị anyị na-anakọta data. Nke a pụrụ ịgụnye esenowo na adreesị IP na ihe nchọgharị. Dị ka ọtụtụ website anyị na-eji atọ akụkụ enyemaka spam nchọpụta na ha nwere ike inweta nke a data.
Ọ bụrụ na ị na-ahapụ a ikwu na anyị na saịtị i nwere ike ịpụ na-azọpụta gị aha, email address na website na kuki. Ndị a bụ gị mma nke mere na ị na-adịghị na jupụta na gị nkọwa ọzọ mgbe ị na-ahapụ ọzọ comment. Kuki ndị a ga-adịgide adịgide maka otu afọ.
Ndị a weebụsaịtị nwere ike ịnakọta data banyere gị, eji kuki, Embed ọzọ-atọ ndị ọzọ nsuso, ma nyochaa gị mmekọrịta na agbakwunyere ọdịnaya, tinyere nsuso gị na mmekọrịta na agbakwunyere ọdịnaya ma ọ bụrụ na i nwere otu akaụntụ ma na-ite na na website.
Anyị nwere ike iji atọ akụkụ maka Analytics nzube.
Mgbe ị na-emeso unu pụrụ ịdị anyị mkpa ọrụ na anyị mmekọ na na ikpe na anyị òkè data banyere gị. Anyị mmekọ na-vetted, mara site na anyị na tụkwasịrị obi.
N'ihi na ọrụ na-aha na anyị na website (ma ọ bụrụ na ọ bụla), anyị na-echekwa ozi nkeonwe ha na-enye ha ọrụ profaịlụ. All ọrụ pụrụ ịhụ, edit, ma ọ bụ hichapụ na ha onwe onye ozi n'oge ọ bụla (ma e wezụga na ha nwere ike ghara ịgbanwe ha aha njirimara). Weebụsaịtị ọchịchị nwekwara ike ịhụ na dezie ozi.
Ọ bụrụ na gị ozi, chat o jupụta a ụdị anyị na-data maka a ezi uche lenght nke oge mgbe azụmahịa gbara.
Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ na saịtị a, ma ọ bụ nwere ekpe comments, i nwere ike ịrịọ ka e exported faịlụ nke onwe onye data anyị jide banyere gị, tinyere ọ bụla data i nyere anyị. I nwekwara ike na-arịọ na anyị na-akwụsị ihe ọ bụla onye data anyị jide banyere gị. Nke a adịghị agụnye ọ bụla data anyị na-ụgwọ na-maka ndutịm, iwu, ma ọ bụ ebumnuche nche.
Onyeọbịa comments nwere ike-enyocha site na akpaghị aka spam nchọpụta ọrụ. Anyị na-eji Mgbakwunye mmekọ.
Esi akpọtụrụ anyị
Via Email ma ọ bụ a Chat Message
Data anyị wee dịrị na-:
ụdị ihe nchọgharị na parameters nke ngwaọrụ-eji nweta website;
aha nke-eweta ọrụ ịntanetị (ISP);
ụbọchị na oge nke nleta;
Webpage esenowo ejikọrọ site (Ntuziaka), nakwa dị ka ụdi page n'elu exiting;
na ọnụ ọgụgụ nke clicks
Anyị na-echekwa gị data n'enweghị. Anyị na-eji naanị mara na tụkwasịrị obi mmekọ na ndị ụlọ ọrụ. Anyị oge hichapụ ihe niile data.
Anyị na-eji data i jiri ọchịchọ obi na-enye anyị iji na-aka ị na gị ase; a nwere ike ime eme trough anyị mmekọ. Ọ dịghị mgbe anyị na-ere gị data na-atọ akụkụ.
Nzube anyị na-ọ bụla rilevant data mma. Anyị na-agbalị na-onye data collection na a kacha nta iji ebu ahịa gị. Na eleghi anya ihe omume nke a iro anyị ga-ọ bụla o kwere omume edinam anyị nwere ike na akara na ụlọ ọrụ ụkpụrụ
Anyị na-arụ ọrụ na Mgbakwunye atọ akụkụ tụkwasịrị obi na mara site na anyị.
Anyị na-adịghị na-eme mkpebi ọ bụla dabeere na ọrụ àgwà.
Anyị partecipate na Mgbakwunye ahịa mmemme. Ọ bụla njikọ na saịtị ndị ahụ nwere ike irite mgbasa ozi ụgwọ na / ma ọ bụ ọrụ ma na-egosi dị ka ndị dị otú ahụ ebe ha na-egosi. Site na-azụ ahịa site na anyị mmekọ, anyị na-arụta ego ọrụ ma si otú ị na-akwado anyị website na na-na niile Ama anyị na-enye na ebe a free ma na-enyere anyị edebe niile ozi emelitere.
Na-agbanwe a Nkwupụta Nzuzo na Kuki Policy
Anyị nwere ezi uche imelite iwu nzuzo mgbe ọ bụla. Anyị na-agba ndị ọrụ na-elele a page oge maka ihe ọ bụla mgbanwe. Mgbe anyị na-eme, anyị ga-melite ụbọchị. Ị na-ekweta na-ekweta na ọ bụ gị na ọrụ iji nyochaa a na iwu nzuzo oge na ibu maara nke mgbanwe.
Site na iji nke a website, ị mata gị nabata ndị a atumatu. Ọ bụrụ na ị na-ekweta na-ndị a atumatu, biko adịghị eji anyị website. Gị aka iso ojiji nke anyị na saịtị na-eso ikenye nke mgbanwe a iwu ga-e weere dị ka a nabata ndị mgbanwe.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ọkt 2021 Nọvemba 2021 Mkpebi 2021 Jenụwarị 2022 Bọchị 2022 Maachị 2022 Abali 2022 Ọnwa Ise 2022 Jun 2022 Julaị 2022 Ọgọst 2022 Sept 2022
© 2021 Kefalonia.mobi	| Kwadoro site na Outstandingthemes